नेपाली क्रिकेट टिमलार्इ अर्को ठूलो मौका, भारतले बोलायो वान-डे खेल्न ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाली क्रिकेट टिमलार्इ अर्को ठूलो मौका, भारतले बोलायो वान-डे खेल्न !
काठमाडौं, साउन २२ । नेपालको अण्डर १९ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भारतमा हुने यू-१९ एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजको मौका पाएको छ । भारतमा हुने ४ टोलीबीचको ५० ओभरको खेलमा नेपालले पनि मौका पाएको हो । सो एकदिसीय खेल भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीइसीसीको आयोजनामा भइरहेको हो ।
खेल कोलकतामा हुने छ । प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत र अफगानिस्तानका यू-१९ टोलीले खेल्ने छन् । चौथो टोली नेसनल क्रिकेट एकेडेमी (एनसीए) यू-१९ टोली छ । यो बीसीसीआईको एकेडेमी टोली हो।
याे पनि पढ्नुस नेपाल भर्सेस भारतः नेपालको सय रन पूरा, इनिङ धरापमा ! [अपडेट]
युवा टोलीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतले प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्ने यो सिरिजमा गत वर्ष श्रीलंकाको यु १९ टोलीलाई बोलाएको थियो यस पटक नेपाललाई अवसर दिएको छ ।भारतको यू-१९ र अफगानिस्तानको यू-१९ टोलीले यो सिरिजलाई आगामी विश्वकपको तयारीका रूपमा हेरेका छन्। नोभेम्बरमा मलेसियामा भएको पछिल्लो एसिया कपमा नेपाली यू-१९ ले भारतको यू-१९ टोलीमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको थियो।
यस्तै सिरिजलाई यू १९ एसिया कपको तयारीको रुपमासमेत लिइएको छ। बंगलादेशले आगामी अक्टोबरमा एसिया कपको आयोजना गर्दैछ। जसमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, हङकङ, बंगलादेश, युएई र अफगानिस्तान गरी ८ टोलीले खेल्ने छन्।
याे पनि पढ्नुस नेपालको ऐतिहासिक विजयमा प्रचण्डको सन्देशः नेपाली टोलीको उच्च सम्मान र प्रोत्साहनमा जरुरी
कोलकामा हुने सिरिजमा सहभागी चार टोलीले एक अर्काविरुद्ध खेल्नेछन् । शीर्ष दुई टोलीले सिरिजको उपाधिको लागि खेल्ने छ । तेस्रो र चौथो हुने टोलीबीच तेस्रो स्थानको लागि प्ले अफ खेल हुनेछ।
चार टोली सम्मिलित एकदिवसीय शृंखलाको तालिका यस्तो छ-
सेप्टेम्बर १२- भारत यू-१९ विरुद्ध अफगानिस्तान यू-१९, इडेन गार्डेन्स
सेप्टेम्बर १२- एनसीए यू-१९ विरुद्ध नेपाल यू-१९, जेयू
सेप्टेम्बर १४- भारत यू-१९ विरुद्ध नेपाल यू-१९, इडेन गार्डेन्स
सेप्टेम्बर १४- एनसीए यू-१९ विरुद्ध अफगानिस्तान यू-१९, जेयू
सेप्टेम्बर १६- भारत यू-१९ विरुद्ध एनसीए यू-१९, इडेन गार्डेन्स
सेप्टेम्बर १६- अफगानिस्तान यू-१९ विरुद्ध नेपाल यू-१९, जेयू
सेप्टेम्बर १८- टिम १ विरुद्ध टिम २
सेप्टेम्बर १८- टिम ३ विरुद्ध टिम
याे पनि पढ्नुस राम्रो खेलेर टेस्ट मान्यता लिन आतुर छौं : कप्तान पारस
ट्याग्स: nepal vs india, nepali cricket team